Amathumbu anokuba nezibonakaliso ezibalulekileyo zesizathu sokuba ichaphazele i-fibromyalgia.
Ngethuba lokuqala, uphando luye lwafumanisa utshintsho oluthile kwiintyatyambo zamathumbu kubafazi abane-fibromyalgia-xa kuthelekiswa nalabo abangachaphazelekanga. Abantu abaninzi abane-fibromyalgia bayakuqonda ukuba isisu sinokuxabana ngamanye amaxesha. Oku kubonisiwe kwinto yokuba eli qela lesigulana lichaphazeleka kakhulu yi-IBS (isifo esiswini esiswini).
Abaphandi baseCanada kwiYunivesithi yaseMcGill ngoku bafumanise uninzi lweebhakteria ezahlukeneyo ze-19 zamathumbu emathumbu ezazivela kwabo bane-fibromyalgia- kwaye bazipapasha kwijenali Ubuhlungu. Omnye wabaphandi abaphambili kolu phononongo ukwathi uxhulumaniso olucacileyo lwabonwa phakathi kobukrakra beempawu kunye nokwanda okanye ukungabikho kwezinye zebhaktiriya yezifo zamathumbu. Nangona kunjalo, ugxininisa ukuba kusekutsha kakhulu ukubona ukuba ngaba sisizathu se-fibromyalgia- okanye ngaphezulu impendulo kwesi sifo uqobo. Kodwa uyathemba ukuba izifundo ezilandelelweyo ziya kuba nakho ukunika ezinye iimpendulo koku.
Iingcebiso zempilo engcono yamathumbu:
Uninzi lwamalungu ethu angaphezu kwe-18000 kwiqela "iRheumatism kunye nePain engapheliyo" inika ingxelo ngeziphumo zezinto ezithile zendalo. Zama ukongeza nge probiotics (Iibacteria ezilungileyo) Isisu seLectinect. Kwabaninzi, kunokuba nefuthe elihle, kwaye siyazi nokuba impilo yamathumbu ibaluleke kakhulu kwindlela oziva ngayo ngenye indlela-zombini ngokwamandla, kodwa nakwimood.
I-Fibromyalgia kunye ne-Intestine
I-Fibromyalgia sisifo esinganyangekiyo esibuhlungu esinokubangela iintlungu emzimbeni wonke-ngokudibeneyo noxinzelelo, iingxaki zokulala kunye nesifo sengqondo esishukumisayo. Iingxaki zesisu kunye namathumbu zixhaphake kakhulu kweli qela lezigulana xa kuthelekiswa nenani eliqhelekileyo. Yintoni enike isibonakaliso esicacileyo sokuba kukho unxibelelwano phakathi kwefibromyalgia kunye nesisu.
Ukuba kuvela ukuba iintyatyambo zamathumbu zidlala indima ephambili ekukhuthazeni okanye ekubangeleni i-fibromyalgia, ukufumanisa okunjalo kungakhokelela ekufumanekeni kwesifo kwenziwa kwangaphambili-kwaye, kunokwenzeka, iindlela zonyango ezintsha ziphuhlisiwe.
Isityalo sakho samathumbu
Ngaphakathi kwisisu sakho kukho indawo ebanzi nexineneyo yecosystem. Oku kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo zebhakteria, ii-virus, i-candida kunye nezinye izinto ezincinci ezikunceda uqhube ukugaya kunye nokufunxa izondlo. Kuyaziwa ukuba intyatyambo esebenzayo emathunjini idlala indima ebalulekileyo ekugcineni impilo esempilweni- njengoko kuqinisekisiwe kwizifundo zophando.
Kwenzeka ntoni xa igut yetshova ingadlali kwimiqolo? Ewe, abaphandi bakholelwa ukuba uninzi lweempendulo kwi-fibromyalgia lunokulala kwisimo esiguquliweyo samathumbu esizibhala ngawo kweli nqaku.
Isifundo: Iipesenti ezingama-87 ngokuchanekileyo
Abathathi-nxaxheba kwisifundo sophando bahlulahlulwa kwaba bafunyaniswa ukuba banesifo i-fibromyalgia kunye neqela lolawulo. Zonke zinike iisampulu zovavanyo lomzimba ngohlobo lweesampulu zomchamo, iisampulu zesitulo kunye namathe-ukongeza ekuqhubeni imbali ngokugqibeleleyo. Abaphandi baphinde bajonga idatha yeklinikhi kwiisampulu kwaye bayithelekisa neqela lolawulo olusempilweni.
Iziphumo zazinomdla kakhulu. Kwavela ukuba ngokuhamba nobuninzi bolwazi kunye nokusebenzisa iimodeli zekhompyuter eziphambili, kubandakanya ubukrelekrele bokuvavanya, uvavanyo lunokuqikelela ukuba ngubani ophethe i-fibromyalgia ngokuchaneka kwe-87% -into enomdla omangalisayo. Ngaba oku kunokuba sisiqalo sophando olusebenzayo lwe-fibromyalgia? Sinethemba lokuba kunjalo.
Iziphumo zifumana iimpendulo, kodwa kwanemibuzo
Uphononongo lubonise ubudlelwane obucacileyo phakathi kweempawu zefibromyalgia kunye nokwanda okanye ukungabikho kweebacteria ezithile zegut. Okukhona umlinganiselo omkhulu ngokungaqhelekanga- kokukhona zisiba mandundu iimpawu. Oku kubandakanya, phakathi kwezinye izinto:
Abaphandi bagxininisa ukuba kuya kufuneka uphando oluthe kratya ukuze lukwazi ukugqiba nge-100% ngokuqinisekileyo-kodwa oku ubuncinci kubonakala ngathi luphawu oluhle kakhulu lokuba bakwinto ethile eguqukayo ekuchongeni isifo se-fibromyalgia.
Siyazi ukuba kunzima kangakanani ukwenza umthambo rhoqo kunye nesifo esinganyangekiyo seempawu zentlungu ezinjengeFibromyalgia. Kodwa loo nto ayenzi ukuba ingabalulekanga kangako- kwaye uninzi lwezifundo lubonakalisile ukuba ukuzilolonga okwenziweyo kunokukunceda unciphise iintlungu kunye nokungasebenzi emzimbeni wakho. Kuya kufuneka usoloko ubonisa ingqalelo kwimbali yakho yonyango kunye nefom yemihla ngemihla.
Kwividiyo engezantsi ungabona inkqubo yokuqeqesha abo bane-rheumatic fiber rheumatic fibromyalgia ephuhliswa yi I-chiropractor Alexander Andorff. Le yinkqubo ethambileyo yokuzivocavoca ekunceda ukuba ugcine umhlana wakho kunye nemisipha engaphakathi ihamba.
Ngaba uyazi ukuba uphando lubonakalisile ukuba ukuziqhelanisa nokuthambisa ngendlela ehlelelekileyo nako kunokusebenza ukunciphisa usulelo?
I-Fibromyalgia kunye nokutya okuChaphazela ukuChaphazela
Ukukhanya komsebenzi obalulekileyo wesithambiso esikuyo ngaphezulu kwefibromyalgia, kubalulekile ukuba ube nokutya okufanelekileyo, okunciphisa usuleleko. Oku kukwathetha ukunciphisa ukutya ukutya okunezokutsha - njengeswekile kunye notywala. Ukuba unqwenela, unokufunda ngakumbi malunga nokutya kwe-fibromyalgia kwinqaku elingezantsi.
Uninzi lwezigulana zisebenzisa iindlela zokuzilungisa kunye nonyango olucinga ukuba luzisebenzela ngokwazo. Umzekelo, uxinzelelo luxhasa kunye neebhola zebhola, kodwa zininzi nezinye iindlela onokukhetha kuzo. Sikwacebisa ukuba ujoyine iqela lenkxaso lendawo-mhlawumbi ujoyine iqela ledijithali njengale iboniswe ngezantsi.
Umthombo: Ukuguqulwa kwezinto eziphilayo ezintsholongwane kubantu abane-fibromyalgia. Ubuhlungu. 2019.
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/tarmen-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 ubuhlungu https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ubuhlungu2019-06-30 12:33:322021-03-24 10:54:27Olu mahluko kwi-gut unokuba yimbangela ye-fibromyalgia
I-Fibromyalgia inokubangela ukwanda kokuvuvukala kwengqondo -Ukuphila ne-Ankylosing Spondylitis